बख्तरबन्दसहित चक्रपथ परिक्रमा गर्दै नेपाली सेना
कैलालीमा १३ वर्षीया बालिका बलात्कारपछि गर्भवती, एक जना पक्राउ
धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरीेर गर्भवती बनाएको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । बालिकालाई बलात्कार गरिीगर्भवती बनाएको दाबीसहित परेको जाहेरीका आधारमा गोदावरी नगरपालिका–५ गेटीका ५० वर्षीय…
कैलालीमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
धनगढी । कैलालीमा १८ वर्षीया किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार पक्राउ पर्नेमा लम्की नगरपालिका–१ भुरुवा बस्ने २१ वर्षीय उमेश…
फेसबुकबाट केटी साथीलाई अश्‍लिल भिडियो पठाउने एकजना पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकबाट केटी साथी अश्‍लिल भिडियो पठाउने एकजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत अश्‍लिल भिडियो, फोटो तथा सन्देश पठाउने सल्लानको कुमख…
सूचना लुकाउँछ सुर्खेत प्रहरी
सुर्खेत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सूचना लुकाउनमा सक्रियता देखाएको छ । मोबाइल नम्बर ९८५८०६६०५५ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारीले र ९८५८००५५५५ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकले प्रयोग गर्ने…
झापामा सरुवा गरेर पठाइएका एसपी प्रधानमन्त्री ओलीकै पूर्व सुरक्षा गार्ड भएको खुलासा
काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मंगलबार विभिन्‍न ३० जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा गरिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको १२० दिनअघि कुनै पनि सरुवा, बढुवा र नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान भएपछि…
निर्वाचनको मिति घोषणापछि एकसाथ ३० एसपीको सरुवा, को-कहाँ (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि एकसाथ ३० प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पुस २१ बसेको बैठकको निर्णयानुसार उनीहरुको सरुवा भएको…
महाकालीको हल्दु गाउँदेखि कालापानीसम्म पाँच बीओपी निर्माण गर्दै भारतीय एसएसबी
काठमाडौं । भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालको सीमा क्षेत्रमा पाँचवटा बीओपी निर्माणको काम अघि बढाएको छ । भारतको पिथौरागढस्थित एसएसबी अधिकारी केएन नगरकोटीले भने, "महाकाली नदी किनार क्षेत्रमा पाँचवटा बीओपी…
कञ्‍चनपुरमा गोली लागेका नरेन्द्र भन्छन् – पहिले डन्डा हानेको थियो, पछि गोली लाग्‍यो (भिडियो)
काठमाडौं । कञ्‍चनपुरको सीमा क्षेत्रमा गोली गोली लागेर घाइते भएका १८ वर्षीय नरेन्द्र लुहारले आफूलाई कसले गोली हान्यो भन्‍ने नै थाहा नपाएको बताएका छन् । भारतीयतर्फबाट सोमबार साँझ साढे ६ बजेतिर भारतीय…
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५० राउन्ड गोली र पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५० राउन्ड गोली र पेस्तोसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंबाट झापाको भद्रपुर जानलागेका एक जनालाई विमानस्थल सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । २० वर्षीय वृजहाङ राई…
ओली फेरि अध्यक्ष, माधव नेपाल डेढ वर्षपछि राष्ट्रपति !
११ देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस, कुन देशमा को ?
गरिब देशलाई खोपमा सहयोग गर्न डब्ल्यूएचओको आग्रह
ओली-नेपाल वार्ता सकियो, के-के भयो सहमति ?
अक्सिजन वितरणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
चीनबाट अक्सिजन ब्याग, मास्क र सिलिण्डर ल्याउदैछौँ : व्यवसायी घिमिरे
कर्णालीमा हालसम्म ९ हजार ६ सय भन्दा बढीले जिते कोरोना
भारतमा कोरोनाका कारण २ लाख ६२ हजार जनाको मृत्यु